एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो सङ्केत देखे? प्रतिवादका लागि तयार रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन – Khabar Patrika Np
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो सङ्केत देखे? प्रतिवादका लागि तयार रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १६:३९:०९
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसवाट अब एमालेलाई खतरा भएकाले प्रतिवादका लागि तयार रहन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसको विगत नै एमाले माथि ह’मला गर्ने भएकाले अब पनि त्यो शिलसिला सुरु हुने उनको भनाई छ ।
केन्द्रीय कमिटीको दशौं बैठकलाई सोमबार तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टी पंक्तिलाई शसक्त प्रतिकारका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन् । उनले त्यसको लक्षण आफुले पाइसकेको समेत बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले समेत अब एमालेलाई जसरी पनि समाप्त पार्ने रणनीति लिएका कारण एमालेका लागि जोखिम बढेको उनको निष्कर्ष थियो ।
कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि जहिले पनि एमाले माथि ह’मला सुरु हुने भएकाले अब पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि ह’मला शुरू गर्ने उनको भनाई थियो । हाम्रो पंक्तिमाथि हुने सम्भाव्य आ’क्र’म’ण र ष’ड्यन्त्रको अनुमान गरेका छौं उनले भने, त्यसैले हामी सचेत र सशक्त प्रतिवादको लागि बस्नुपर्छ ।’ देउवाले २०४८ सालदेखि नै एमालेमाथि दमनकारी नीति लिएको भन्दै उनले शसक्त प्रतिकारका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छन् । सबैलाई याद होस् ।’
त्यस्तै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले हतारिएर सांसद पदबाट राजीनामा दिएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रावलको राजिनामाबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालले १० बुँदे सहमति पालना नगर्ने र देउवालाई विश्वासको मत नदिई नछाड्ने भएपछि रावलले राजीनामा दिए पनि त्यो आवश्यक नरहेको बताए ।